LATAM inozivisa nzvimbo nyowani yeCaribbean, inowedzera kubatana kubva kuLima
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » LATAM inozivisa nzvimbo nyowani yeCaribbean, inowedzera kubatana kubva kuLima
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Chile Kupwanya Nhau • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
LATAM Airlines Group nhasi yazivisa nendege mbiri nyowani kubva kuLima hub inosanganisira nzvimbo nyowani yeCaribbean, Montego Bay (Jamaica), uye nekushandira kwakananga kuCalama, Chile.
Kutanga 1 Chikunguru 2019, LATAM Airlines Peru ichashanda nendege nhatu dzevhiki kuenda kuMontego Bay, ichipa kubatana kwakaringana nemaguta ePeru, Chile, Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay neBolivia. Iyo nzira ichafambiswa neAirbus A320 ndege ine vanokwana 174 vafambi, zvakaenzana nenhamba yezvigaro makumi mashanu nezviviri nemazana matanhatu pagore.
Zuva rinotevera (2 Chikunguru 2019), LATAM ichatanga nendege nhatu dzisingamisi kubva kuLima kuenda kuCalama (Chile), gedhi kuenda kuSan Pedro de Atacama, ichideredza nguva yekufamba pakati pemaguta maviri nemaawa mana, maminetsi makumi matatu.
"Chikunguru chaChikunguru, tichapa vatakuri vedu kunyange sarudzo hombe nenzvimbo nyowani muCaribbean pamwe nekufamba kwenguva ipfupi pakati peLima neCalama, gedhi reSan Pedro de Atacama," akadaro Enrique Cueto, CEO weLATAM Airlines Group. "Sechikamu chekuzvipira kwedu mukupa kubatana kusingaenzanisike muLatin America, tinoramba tichiita kuti zvive nyore kutsvaga zvakanakisa zvinopihwa nedunhu rino, nenzvimbo dzakawanda nenzvimbo dzendege kupfuura chero rimwe boka renhandare."
New Caribbean kuenda: Montego Bay
Inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweJamaica, Montego Bay inzvimbo yemari yechitsuwa uye musuwo mukuru kune dzakawanda nzvimbo dzayo dzekushanyira uye nzvimbo dzevashanyi. Jamaica yegore rose inotonhora mamiriro ekunze, chena jecha mahombekombe, yakajeka-yakajeka mvura uye yakapfuma tsika tsika inokwezva vashanyi vanobva kutenderera pasirese.
Kubva 1 Chikunguru 2019, LATAM Airlines Peru ndege LA2464 (Lima-Montego Bay) ichasimuka Jima Chávez International Airport neMuvhuro, China neSvondo nenguva dza12: 05, vachisvika kuMontego Bay na17: 00. Ndege yekudzoka (LA2465) ichashanda nemazuva akafanana uye ichibva kuSangster International Airport na18: 05, ichisvika muLima na22: 50 (nguva dzese dzemuno).
Nekuwedzera kweMontego Bay, LATAM ichashandira nzvimbo shanu muCaribbean neCentral America: Havana (Cuba), Punta Kana (Dominican Republic), Aruba neSan José (Costa Rica), pamwe nedzimwe nzvimbo dzekutandarira pagungwa reCaribbean kusanganisira Cancun. (Mexico), Cartagena neSan Andrés (Colombia).
Kutanga 2 Chikunguru 2019, LATAM Airlines Peru ndege LA2387 (Lima-Calama) ichasimuka kubva kuLima's Jorge Chávez International Airport neChipiri, China neSvondo nenguva dza00: 15, vachisvika kuCalama na03: 45. Ndege yekudzoka (LA2386) ichashanda nemazuva akafanana uye ichibva kuEl Loa Airport na04: 35, ichisvika muLima na06: 05 (nguva dzese dzemuno).
Nenguva yekubuda uye yekudzoka nguva yemaawa maviri, maminetsi makumi matatu, iyo isingamire Lima-Calama sevhisi inoderedza nguva dzekufamba pakati pemaguta nemaawa angangoita mana, maminetsi makumi matatu. Iyo sevhisi yakarongerwa kubatana zviri nyore nendege kuenda / kubva kuUnited States uye ichave ichishandiswa nendege dzeAirbus A30 dzinokwana 30 vafambi, ichipa huwandu hwese hwezvigaro zve320 pagore.
Kuwedzera kwenzvimbo yeLATAM
Mumakore matatu apfuura, LATAM yakatanga nzira dzisati dzamboitika makumi matanhatu nenomwe, ichibatanidza nharaunda senge rimwe boka renhandare dzendege dzinopfuura chiuru nemazana matatu dzendege dzezuva nezuva dzinoenda kunopfuura 67 nzvimbo dzepasirese. Muna 1,300 chete, LATAM yakavhura masevhisi kunzvimbo nyowani dzenyika dzese kusanganisira Costa Rica, Boston, Las Vegas, Roma neLisbon. Muna Zvita, ichatanga nendege kuenda kuTel Aviv uye muna 140 ichashandira Munich kekutanga.